Home News MW Farmaajo oo ka xanaaqay sawirka uu ku dhex jiro Taangiga AMISOM,...
MW Farmaajo oo ka xanaaqay sawirka uu ku dhex jiro Taangiga AMISOM, codsadayna in caruurta loo soo saaro si uu isugu sawiro
MW Farmaajo oo shalay safar aan horey loo shaacinin ku tagay Degamada Marka ee Gobolka Shabeeladda Hoose ayaa waxa halkaas ku ilaalinaysay ilaalada AMISOM. Markaii shalay uu soo baxay sawir isaga oo ku dhex jiro Tangiga ciidamadda AMISOM oo ahaa mid ka tarjumaya xaqiiqda dhabta ah ee uu ku nool yahay Farmaajo, ayaa MW Farmaajo waxa uu wax ka badalay safarkiisii uu ku tagay deegaankaas. Qorshaha Farmaajo ayaa ahaa in uu saacado joogo magaalada Marka, si hadaba uu sawirkaa mid ka duwan Soomaalida ula wadaago ayuu codsaday in dhalinyaro loo soo safo wadooyinga qeybta ku dhow xurunta AMISON si looga sawir una soo saaro sawir ka duwan kii uu Taangiga ku dhex jiray. Shalay saacadihii danbe ayaa dhalinyaro la soo saaray ka dibna sawir laga qaaday isaga oo la ciyaarayo. Sawiradaas ayaa uu codsaday in lagu baahiyo baraha Bulshadda.
Waxaa nasiib xumo ah in MW Farmaajo waqti ku lumiyo been abuur iyo ka fogaanshaha runta. AMSIOM ayaa sidoo kale ku tilmaamtay imaatinkiisa mid igu sawir ah oo aan ka tarjumeynin baahida loo qabo in kooxda Argagaxisada Al Shabaab lagula dagaalo.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Taageertay Sacuudigga ka dib Dilkii Wariye Jamaal
Next articleMadaxweyne Farmaajo ma fulin doonaa Balanqaadyadii Marko uu ka sheegay,Misa Hadaladiisa hore uunbeey meel la mari doonan!!
Nuqul ka mid ah Warqadiisa Aqoonsiga oo laga gudoomay Danjiraha Soomaaliya...